Momba anay - Jujia Electronic Technology Co., Ltd.
Ny marika GIGAJEWE dia nanomboka tamin'ny taona 2010. Manolo-tena izahay ny hamorona diamondra efa lehibe an-trano miaraka amin'ny fahasamihafana sy ny fahamailoana toy ny diamondra, ary ny fanaovana azy ho firavaka, hany ka betsaka ny olona manana vatosoa toy izany amin'ny vidiny mora kokoa.
Ny orinasanay dia efa ela no nirotsaka tamin'ny famokarana sy ny fanapahana ny menaka avo lenta vita amin'ny diamondra avo lenta toy ny CVD, HPHT, MOISSANITE, sns. Ny vokatra dia aondrana any amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Manana ny fizotran-tsolika sy famokarana tsara indrindra sy ny herin'entana mandroso indrindra any Sina izahay, nahazo laza tsara ary ny fahatokisan'ny mpanjifa sy ny fanohanana avy ao an-trano sy any ivelany.
Androany isika dia efa nandroso teknolojia famokarana akora ary fitaovana manapaka diamondra, mpanamboatra firavaka mahafinaritra sy mpanao asa tanana firavaka tsara. Tsy toy ny mpanamboatra motera mekanika hafa, izahay dia manaraka hatrany ny fihenan'ny torolàlana mba hahazoana antoka fa tonga lafatra sy mamiratra ny vokatra tsirairay.